Gondaritti laganaan gabaa Oromiyaatti simannaan hidhamtootaa ittifufe - BBC News Afaan Oromoo
20 Guraandhala 2018
Image copyright face book
Mootummaan labsii yeroo muddamaa labsuurreen ummanni naannoo Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessatti akkuma duraatti bahuun namoota hidhaatii bahaniif simannaan taasifamu jiraachuu maddeeleen BBC mirkanneessan.
Akkuma dhagahame wantoota labsii dhiheenya kana labsameen dhorkame keessaa tokko tutaan bahu, walitti qabamuufi mormuun isaa mumeedha. Haa ta'u malee godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti uummanni haala kan duraa caaluun bahuun namoota hiidhaa gadhiifaman simataa jira. Akkasumas dhaadannoowwan mootummaa mormanis dhaggeessisaa turan.
Guyyaa Dilbataa simannaa Obbo Addisuu Bullaalaatiif Godina Gujiitti taasifame irratti namoonni kumaatamaan lakkaa'an akka argaman dubbatama. Haaluma walfakkaatuunis, faallaa labsii yeroo muddamaatiin Wiixata kalleessaas godina shawaa lixaa Aanaa Jalduutti simanaan hidhamtootaaf haala ho'aa taasifamuu isaa midiyaan mootummaa OBN gabaaseera.
Maddi BBCn dubbisee kan biraas, simannaan akkuma jarreen hidhaarra turan gadhiifamuun dhagahamee kaasee uummanni qophii taasisaa turan Wiixata gaaggeessuu isaanii Dambii Doolloo nutti himaniiru.
Sirini simmannaa Jaladuurratti kan hirmaatan ogganttooti paartii mormituu keessaa Dr. Mararaa Guddinaaa "uummanni Oromoo tokkummaasaa cimsuu qaba'' jechuun waamicha taassuun OBN gabaaseera.
Karaa gara biraatiinis, labsii erga taasifameen booda naannoo Amaaraa magaaloota tokko tokko keessatti mormiin lagannaa gabaa jiraachusaa dhagahameera.
Labsiin yeroo muddama labsamee guyyoota lamaan booda Magaalaa Gondariitti mormiin hojii dhaabufi lagannaa gabaa Wiixata irraa kaasee taasifamaa kan jiru yoo ta'u, dhaabbileen daldala cufamuufi tajaajilli geejibaas adda akka citeetti itti fufuusaa jiraattoonni magaalichaa BBC'tti himaniiru.
Haa ta'u malee, waajjiraaleen mootummaa kalleessa tajaajila idileesaanii keennaa olanis har'aa qaama mormii tausaanii dhagahameera. dhagahame.
Kantiibaan magaalatti Taqabbaa Tabaabaal 'waamicha mormii laganaa gabaa eenyu akka waame hinbeekamne kana ummanni balaaleeffachu qaba' jechuusaanii eeruun komunikeshiiniin mootummaa federeaalaa fula feesbukii isaanirratti maxxanseera.
Jiraattoonni magaalichaa BBC'n dubbisees mormicha eenyu akka waamee ifatti hinbeekamu jedhaniiru
Akkasumas magaalaa Baahir Daar naannoolee tokko tokkoofi Dabra taaboorittis mormi muraasni jiraachu dubbatama. keessatti
Ragaa agarsiisaa hubachisuu
Ummanni Oromoo daangaa hanga daangaa gammachuu ibsataa jira
14 Guraandhala 2018
Suuraa abbaa fi intala dhidhimanii, balaa godaansaa saaxile
'Rakkoo tibbanaan wal-qabatee miseensonni keenya hidhamaa jiru'
Yaalii fonqolcha mootummaarratti gabaasalee waldhahan
'Basaasaan odeeffannoo walitti qabuu irrattillee rakkootu jira'